खुसीको खबर: छलफल पछी काठमाडौँको लकडाउन खोल्ने निर्णय यस्तो भयो ! – Namaste Dainik
June 4, 2020 NamastedainikLeaveaComment on खुसीको खबर: छलफल पछी काठमाडौँको लकडाउन खोल्ने निर्णय यस्तो भयो !
काठमाडौँ। लकडाउन उल्लंघन गरेर व्यवसायीले आफै पसल खोल्न थालेपछि बसेको तीनववटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आकस्मिक वैठकले पसल खोलेका ब्यवसायीलाई हस्तक्षेप नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
लामो समय देखिको लकडाउनका कारण आजित परेका ब्यवसायीमा विहिवार देखि विहान ११ वजे सम्मका लागि पसल ब्यवसाय खोल्ने निर्णय गरेका छन् । सोही निर्णय वमोजिम विहिवार देखि काठमाडौंका मुख्य वजारमा पसल ब्यवसाय खुल्न थालेपछि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आकस्मिक वैठक गरेका थिए। उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्लासहित सरोकारवाला निकाय लकडाउन खुकुलो बनाउन तयार भएका हुन्।
बिहीबार जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँको हलमा बसेको संयुक्त बैठकमा काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) सहित सरोकारवाला ले व्यवसायीले पसल संचालन गरे हस्तक्षेप नगर्ने विषयमा छलफल भएको छ।
संयुक्त बैठकले गृह मन्त्रालयमार्फत उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा गठन गरिएको उच्चस्तरीय समितिलाई उपत्यकामा लकडाउन खुकुलो बनाउन सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । लामो समय देखिको लकडाउनले सर्वसाधारणको जनजिवन प्रभावित भएको छ । व्यवसायीहरुको बैंकमा लिएको ऋण बढ्दै गएको छ भने भाडा तिर्न पनि नसक्ने अवस्था आएको छ । दैनिक ज्याला गरेर खाने निम्न स्तरका मजदुरको रोजीरोटी खोसिएको छ।
बैठक सार्वजनिक यातायात, शैक्षिक संस्था, सिनेमा हल, सभासम्मेलन तथा भेला हुन भने नपाइने गरी लकडाउन खुकुलो बनाउने सहमत भएको छ । सोही अनुसारको सिफारिस उच्चस्तरीय समितिलाई गर्ने निर्णय भएको भक्तपुरकी सिडिओ हुमकला पाण्डेको पुष्टि गरेकी छन्।
चैत ११ गतेदेखि गरिएको लकडाउनले जनजीवन प्रभावित भएको बेला उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले उपत्यकामा बिहीबारदेखि पसल खोलेर सञ्चालन गरेका थिए । त्यसपछि प्रशासनमाथि दवाव बढेको थियो । बैठकमा काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका सिडिओसहित चारवटै सुरक्षा निकायका जिल्ला प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका पदाधिकारहरु समेत सहभागी रहेको बताइएको छ।
जेष्ठ-२२ गते शुक्रबारको राशिफल।
June 11, 2020 July 20, 2020 Namastedainik